Olona efatra naratra tamin'ny fitifirana tany Berlin
Home » Lahatsoratra farany farany » Crime » Olona efatra naratra tamin'ny fitifirana tany Berlin
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Olona efatra no nentina haingana tany amin'ny hopitaly niaraka tamin'ny ratra mafy taorian'ny fitifirana tao amin'ny distrikan'i Kreuzberg any Berlin
Nalefa ny polisy mitam-piadiana ary misy ny fanarahan-dia an'ireo olona voarohirohy ary eo am-panaovana izany hatrany akaikin'ny fiantsonan'ny metro.
Raha ny filazan'ny polisy sy ny sampan-draharaha mpamono afo any Berlin dia niseho tao amin'ny distrikan'i Kreuzberg tao Berlin tamin'ny fiandohan'ny sabotsy teo. Ny mpitondra tenin'ny polisy dia nanamafy fa nisy ny fitifirana olona maro fa tsy nanome antsipiriany bebe kokoa.
Tao amin'ny hafatra navoaka tao amin'ny Twitter, nilaza ny sampana mpamono afo ny tanàna fa olona telo no naiditra hopitaly naratra mafy. Ny roa tamin'ireo niharam-boina dia hita teny amin'ny toerana nitrangan'ny asan-jiolahy raha ny olona fahatelo kosa dia nongotana avy amin'ny lakandrano teo akaiky teo ary naratra ny tongony, hoy i Berliner Zeitung. Nanamafy ny polisy taorian'izay fa olona fahefatra no naratra tamin'io tranga io.
Ny haino aman-jery any an-toerana, nitanisa ny kaontim-nahita maso, dia nilaza fa nisy mpitandro ny filaminana mitam-piadiana mahery vaika nalefa tany an-toerana hitady ireo voarohirohy tamin'ny fitifirana. Helikoptera polisy ihany koa no nampiasaina tamin'izany.
Mbola eo am-pikarohana ny toe-javatra nahatonga ny fitifirana ny tompon'andraikitra.